အောင်ဝင်းခိုင် ဖမ်းဝရမ်း နေပြည်တော်မှာ ဘာကြောင့်မထုတ်သလဲ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအောင်ဝင်းခိုင် ဖမ်းဝရမ်း နေပြည်တော်မှာ ဘာကြောင့်မထုတ်သလဲ
May 22, 2017 May 22, 2017 drkokogyi
20 မေ၊ 2017 အိသန့်စင်
“တရားရုံးက ထုတ်ပေးတဲ့ ဝရမ်းမှာကိုက မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း မည်သည့် အရပ်ဒေသတွင် မဆို ဖမ်းဆီးနိုင်သည်ဆိုတဲ့ တိတိကျကျ ဖော်ပြထားတဲ့ဝရမ်းမျိုး ဖြစ်သင့်တာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီ့လိုမျိုး ဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုး ထပ်ပြီးတော့ တင်ပြပြီးတော့ တောင်းနေစရာ မလိုဘူးပေါ့။ အခုတော့ အဲ့ဒီ့လို မဖြစ်တဲ့အတွက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု လျှောက်လွှာ တင်သွင်းပြီးတော့ ပြင်ပေးဖို့အတွက်ပြောရတယ်လို့ ကျနော်တို့ထင်ပါတယ်။”
” နောက်ပြီးတော့တခါ ဒီအောင်ဝင်းခိုင်ကလည်း တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းဖြစ်တယ်။ အခုတာဝန်ယူထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလူတွေကလည်း တပ်မတော်က ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာ ဖမ်းဖိုရန်အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေနေ၊ အခက်အခဲ အများကြီးကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။”
“ပြည်သူလူထုတွေအမြင်ကတော့ တရားရေးဌာနရဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ သံသယဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဥပမာ မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် သေနတ်တလက်မှ မမိပဲနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ဥပဒေနဲ့စွဲပြီးတော့ ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချလိုက်တဲ့အမှုတွေရှိတယ်။ ဘာလက်နက်မှကို မရှိဘူး စာရွက်တောင်မရှိဘူး။ အဲ့တာကိုဖမ်းပြီးတော့ အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းရေး အက်ဥပဒေနဲ့ စွဲပြီးတော့ ထောင်ချလိုက်တယ်။ ဒီအမှုကျတော့ သေနတ်တွေလည်းမိတယ်။ သက်သေခံအထောက်အထားတွေလည်း တော်တော်များများ ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ ရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးမိတယ်။ ဒါကိုတောင် အဲ့သလို အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေနဲ့အရေးမယူတာကတော့ ကျနော်တို့အစိုးရပိုင်းရဲ့ အားနည်းချက်လည်းပါတယ်။ တရားရေးဌာနရဲ့အားနည်းချက်လည်းပါတယ်။ ဥပဒေဌာနရဲ့ အမှုစွဲဆိုတင်ပြမှုချို့ယွင်းမှုကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ ကျနော်တို့ကတော့ ပြောချင်ပါတယ်။”
← ​နေမျိုး​ဝေ တပည့်​”ကိုသီရိ ဘာကြောင့် အဖမ်းခံရလဲ
“ဝီရသူဆိုတဲ့ကောင်က ဘုန်းကြီးအတု မစိုးရိမ်တိုက်ကအကောင် သင်္ကန်းခြုံအတု”ဟု စင်အောက်မှ အော်ဟစ်ခဲ့သူ ကိုသီရိ ဖော်ကောင်လုပ်ပြီ →
Why Islamophobia? ﻿" မွတ်ဆလင်မ်တွေ ဘာလုပ်မိလို့မုန်း ? " (သို့) "အဖြေမရှိသော မေးခွန်းများ"